आँचलसंग बिहे गरेका डा. उदिपको फिलिपिनी पुर्व प्रेमिकाको तस्विर सार्बजनिक, यो बच्चा को होला ? – Online Nepal Site
पाइलटले गरे यस्तो महान काम, जसको हुँदैछ विश्वभरी चर्चा
१० बुँदे कार्यान्वयन नभएपछि यि मुख्य नेता माधव नेपालकै पार्टीमा फर्किए
मुख्य पृष्ठ /Video/आँचलसंग बिहे गरेका डा. उदिपको फिलिपिनी पुर्व प्रेमिकाको तस्विर सार्बजनिक, यो बच्चा को होला ?
आँचलसंग बिहे गरेका डा. उदिपको फिलिपिनी पुर्व प्रेमिकाको तस्विर सार्बजनिक, यो बच्चा को होला ?
4,840 1 minute read
पोखरा । भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिएका अभिनेत्री आँचल शर्मा र उदिप श्रेष्ठको हिजो आज धेरै गसिप हुने गरेको छ । उनीहरुको विवाहमा देखिएको तडक भडक देखि पुर्व प्रेमिकाको बारेमा हिजो आज निक्कै चर्चा भईरहेको छ ।
करिब एक वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरुले केहि साता अगाडी मात्र विवाहमा परिणत गरेका हुन् । निक्कै हुने खाने परिवारका यी दुवैले आफ्नो विवाहमा राम्रै खर्च गरेका थिए । स्टार होटेलमा रिसिप्सन देखि हेलीकप्टरमा गरिएको सवारीले फिल्मी नगरीमा एउटा तहल्का नै मच्चायो ।
यी दुइजना नया जीवन सुरु गर्दै गर्दा अर्को गसिपले पनि बजार तातिएको छ । हुनत उदिप श्रेष्ठले स्वीकारी सकेका छन । उनको पुर्व प्रेमिकाको बारेमा बोलिसकेका छन । उनको पहिलो प्रेमिका भने फिलिपिनी हुन् । दोस्रो प्रेमिका भने नेपाल कै हुन् । ति नेपाली प्रेमिका अरु कोहि नभएर नेपाल कै चर्चित भलिवल खेलाडी तथा नायिका सिपोरा गुरुङ्ग हुन् ।
उदिप श्रेष्ठले सार्बजनिक रुपमै नाम नलिएपनि सिपोरा गुरुङ्गले भने यस अघि नै नेसनल टेलिभिजनमा यो कुरा सार्बजनिक गरेकी थिइन । उनले आफ्नो प्रेमी उदिप श्रेष्ठ मात्र भनेका छैनन् पहिलो र अन्तिम प्रेमी पनि उनि नै हुन् भनेकी छन ।
यसै बीच उदिपको पुर्व प्रेमिका भनिएकी फिलिपिनी युवतीको तस्विर सामाजिक संजालमा सार्बजनिक भएको छ । प्रेमिकाको मात्र हैन तस्विरमा एउटा शिशु पनि देखिन्छ । तर ति शिशु उदिप र उनको प्रेमिका कै हो वा अन्य कसैको हो भन्ने भने स्पष्ट छैन । जुन शिशुसंग उदिप पनि संगै छन । तस्विर कहा कसले सार्बजनिक गर्यो त्यो भने खुलेको छैन । तर रिलेसनसिपमा मात्र रहेको बताउने उदिपलाई यो तस्विरले फेरी टाउको दुखाएको छ । पोखराबाट संचालित समाचारपाटी डक कमले यो तस्विर सार्बजनिक गरेको हो । भिडियो हेर्नुहोस :
टिक-टककी रानी सुमी पहिलो पल्ट मिडियामा, ‘दिनभरि काममा बेस्त रातमै हुन्छ माय’ बोल्दा-बोल्दै बाबालाई सम्झेर भईन भा’बु’क (भिडियो सहित)
मृ*तक सोनुको आमा पहिलोपटक मिडियामा, मर्नुअघि आमासँग यसो भनेकी रहिछिन..आमा र बहिनिले गरे पर्दाफास (हेर्नुहोस भिडियो)